Radio Fahazavana FM 88.6 Mhz | pour le développement de l'homme et de tout homme
Radio Fahazavana FM 88.6 Mhz
pour le développement de l'homme et de tout homme
Posted on November 24, 2012 by Tiana Maharavo	Aiza zay ze lena eoFiangonana Anatirova - FampihavananaValan-dresaka nataoin'i Louisette RAHARIMALALA
Nifamotoana teny anaty rova ny andriana 7 reny eo amivon’ny lerina enina toko lba hanao fanompoam-pivavahava ho fiderana an’Andriamanitra hahatontosa ny fampihavanana. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ny Filoha Legitra eo anivon’ny CST, Me Hanitriniaina RAZAFIMANANTSOA niarakatamin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Teny an-toeranna ihany koa ireo ampanjaka sy zanaka mpanjaka avy amin’ny Faritra. Nampifandrifiana ny daty farana nisian’ny fandroan’ny mpanjaka dia ny 22 Novambra ny fanompoam-pivavahana izay natao. Nanatitrantitra ny mpitandrina izay nitondra ny tenin’Andriamanitra fa fepetra ilaina hisehoana eo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona ny fahadiovana. Ny tsy fahatanterahan’ny olombelona eo imason’Andriamaitra no anton’ireo fandaharam-pidiovana samihafa ao anatin’y Baiboly. Mampirindra ny fiaraha-monina ny fitoerana ho madio eo min’ny lafiny rehetra.
Taorian’izay dia nisy ny hafatra nampitain’ireto taranak’andriana 7 reny eo anivon’Imerina eni-toko ireto. Soatoavina Malagasy ny famitranana fihavanana. Aoka hatomboka amin’izao 22 Novambra izao io dingana io.
Nisy ny valandresaka nataon’i Rtoa Louisete Raharimalala mikasika ny fiampangana nataon’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Tafika azy mikasika ny raharaha tandroka. Nisy ny fijoroana vavolombelona an-tsoratra sy nivantana tamin’izay fampijaliana nahazo ny vahoaka. Nisy ny resaka nifanaovana tamin’ny Filoha Zafy Albert. Nilaza izy fa tsy manjasitraka izaofitondrana maloto izao ny tenany. Mitaky ny tetezamita madio sy vaovao ny tenany. Tsy handray anjara ary tsy manana kandidà filoham-pirenena 2013 ny Ankolafiny.
Tsy nisakana ny mpitaky ny fahatongavan’ny Filoha an-tanindrazana ny orana nikija ny zoma teo. Niantso ny FFKM handray anjara feno amin’ny famaranana ny krizy ny nandahateny teny an-toerana.
Posted on November 12, 2012 by Tiana Maharavo	Hosted by Kiwi6 file hosting.
Niditra nivantana nandritra ireo kabary nifandimbiasana teny amin’ny kianjan’ny MAGRO Behoririka ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara. nohazavainy fa tsy madio ary tsy mangarahara ny fifidianana izay kasaina atao eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisan’anjaran’izay rehetra milaza fa mahavita azy eo amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Ny famerenana ny ny ara-dàlana dia miray zotra amin’ny fanajana ny demokrasia sy ny zon’olombelona. Ny fiverenana amin’ny ara-dàlana dia tokony hanara-penitra. Efa voafaritr’izao tontolo izao io fepetra tokony harahina io ary ny SADC no mnara-maso sy manao izay hampiharana izany araka ny tondrozotra. Arak’izao tontolo izao dia tsy nandroso i Madagasikara raha teo amin’ny fampanjakana ny zo fototra. Tamin’ny fomba diplomatika dia nilaza ny Vondrona Eoropena fa mampisalasala ny fanantanterahana ny tondrozotra eto Madagasikara. Ny Vondona Afrikana dia nanamafy fa tokony tanterahana hatramin’ny farany ny tondrozotra. Nilaza ihany koa ny Filoha fa voahitsakitsaka indray ny zo haneho hevitra sy hanao gazety eto Madagasikara. Misy ireo mpanao gazety izay hiakatra fampanoavana nohon’ny fanatanterahana ny asany. Ny Radio Fahazavana sy ny haino aman-jery hafa izay nakatona dia efa aman-taonany no tsy nisokafany.
Mbola nohamafisiny ihany koa fa tsymaintsy tafaverina eto Madagasikara ny tenany na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana. Nanome toky izy ary nampahery ny mpitarika mba hanmpahery ny vahoaka malagasy izay mijaly vokatry ny fanonganam-panjakana nataon’i Andry Rajoelina. Tokony ho efa nivoaka ny gadra politika, tsy tokony hisy intsony ny fanenjehana mpanao gazety ary tsy tokony hisy intsony ny sesintany tsy mahazo mody. Mitohy hatrany ny hetsika eny Kianja
VM 05-10-2012 : MITAKY VALISOA NOHO NY FISAMBORANY AN’I RASOLO STEPHAN NY MPANDRAHARAHAN’NY FONJA
Posted on November 5, 2012 by Tiana Maharavo	Adj Chef Vonjy Zafilahy - SGI AntanimoraTaorian’ny fahafahana nomen’ny Fitsarana an’ireo mpiandry fonja notazomin’ny zandary dia mitaky ny hampiharana ny and.46 ao amon’ny lalana 95-010 tamin’ny 23/06/95 mikasika ao amin’ny sata manokana ho an’ny “Corps de l’Administration Pénitentiaire” ny ao Antanimora.
Araka ny nambaran’ny Mpanara-maso anatiny ao amin’ny Fonjaben’Antanimora dia tsy nanaja ny lalana manankery eto amin’ny tanin’ny Repoblika ny Zandarmeria. Mahalala tsara ny lalana mifehy an’ireo tafika hafa ny mpandraharaha ny fonja. Tokony hiara-miasa ny Zandary sy ny Penitaka. Na dia samy mpasam-panjakana aza ny Penitasiera sy ny Zandary dia tsy toky hisy ny fifanambaniana amin’ny fanaovana ny asan’ny Fanjakana. Mitaky ary izy amin’ny Ministera miahy ny Fonja mba hanome an’ireo mpiambina ny fonja izay nahatratra an’i Rasolo Stephan, jiolahy raindahany, fampiakarana grady na fanondrotana karama na fanomezana promotion. Nivarotra aina izy ireo ary raisin’ny mpandraharaha ny fonja ho “service exeptionnel et acte de courage” izany.
Mijery ny fanajana ny zon’olombelona ihany koa ny Fonja. Misy ny zo faritan’ny lalàna azon’ny voafonja takiana. Tsy ny mpandraharaha ny fonja no namorona ireo lalana ireo, hoy ny SGI Antanimora, fa ny fanjakana rehetra nifandimby teo. Anisan’ny zo faritan’ny lalàna manan-kery ananan’ny olona foonjaina ny fahazoany fitsidihana, ny fivoahana arahina mpiabina ary ny fivoahana hahazo fitsaboana eny amin’ny hopitaly. Araka ny lalàna mifehy ny fonja ihany dia ny afaka manome io fahazoan-dàlana hivoaka io ny Minisitra ho an’ny voafonja efa nahavita ny antsasaky ny saziny, ny Chef d’Etablissement ho an’ny voafonja efa voatsara, ary ny Fitsarana ho an’ireo iay mbola miandry fitsarana. Posted in Uncategorized	|
Posted on November 4, 2012 by Tiana Maharavo	CST NAIKA ELIANE
Teo ampiandrasana ny fidirana mivantana avy amin’ny Filoha RAVALOMANANA dia nisy ny fanehoan-kevitra izay nataon’ny mpitarika avy ao amin’ny Ankolafy Zafy ireo CST – CT ao amin’ny Ankolafy Ravalomanana raha ny sabotsy teo.
Tsy azo atokisana ny Delegasionin’ny Parlementera notarihan’i Philipe Boulon. Ekipan’i Sarkozy izay nahatsiaro ny fahavoazana nihatra tamin’ny FAT eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ireo nohon’ny tsy fandraisan’ny Vondrona Eoropeana ity farany. Natsangana tamin’ny Janoary 2012 io vondrona io. Ny anton-diany eto Madagasikara hoy ireo mpitarika dia ny hamafa ny zava-bitan’ilay ekipa voalohany izay nilaza, araka ireo mpitarika teo amin’ny Magro, fa hanova ny diplomasia frantsay raha ny amin’ny raharaha Madagasikara. Io ekipa voalohany io dia tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana nataon’i Rajoelina teto Madagasikara.
Raha ny raharaha AV7 dia nilaza ihany koa ireo mpitarika fa “vazaha lany mofo” i David Eirlegh. Io mpisolo vava Afrikana tatsimo io no nantsoin’i Andry Rajoelina hanavotra azy amin’izao honahona politika misy azy izao. Ny mampiletika azy anefa no nataony. Vao mainka nasongadin’i Magro fa fikaramana sy fitadiavam-bola no nataon’i Rajoelina tamin’ny 7 Febroary. Tsy mahaloha ny volan’olona intsony Rajoelina ankehitriny ka ny fananan’ny Filoha Ravalomanana indray no tadiavina alaina. Ho an’ny solon-tena avy any Moramanga dia fanapepoana ny sain’ny Malagasy ireny lainga afafy rehetra ireny. Havendranana miharihary hoy izy no miseho etyo Madagasikara ankehitriny.
VAKY NY ADY EO AMIN’NY FONJA SY NY ZANDARY
Posted on November 2, 2012 by Tiana Maharavo	Ny ao an-dapa mikorontana. Ny ao am-ponja misavoritaka. Izany no zavamisy eto Madagasikara taorian’ny tsy fankasitrahan’ny sendikan’ny mpiambina ny fonja eto Madagasikara marindrano ny fihazomanan’ny Zandarmaria ireo mpiambina ny Fonja 12. Izany dia taorian’ny nisamboran’ny Emoreg an’i Rasolo Stephan gadra nitsoaka namaky ny Access Bank Andraharo. Tsy nihambahamba ny Zandarmaria nilaza fa mpiray tsikombakomba tamin’ity gadra nitsoaka ity ireto mpiambinany fonja voasambotra ireto ka notazomina. Nilaza kosa anefa ny mpandraharahan’ny Fonja fa tonga mba hisambotra sy hamerina an’i Rasolo Stephan tao Antanimora izy ireo.
Araka ny fitantaran’i Adj Chef Vonjy Zafilahy, SGI (Surveillant Général Intérieur) ao amin’ny Fonjaben’Antanimora dia tsy mahay ny lalana mifehy ny fonja velively ny zandary. Manan-jo araka ny lalana hisambotra sy hampiditra am-ponja izay gadra rehetra nitsoaka ny “pénitentiaire”, hoy izy. “Efa ho iray volana no nitsoaka io lehilahy io ary efa nisy ny fikarohana natao taminy. Araka ny reseignement rehetra azon’ny mpandraharaha ny fonja ity dia fantatra fa mihaodihaody teny Tsiadana i Rasolo Stefan. Nandefa mpiambina nanao ankajo sivily ny Fonjan’Antanimora hisambotra azy”. Nalain’izy ireo ny Kalack teny an-tanany ary efa voafehy sy teo ampelatanan’ireo mpiambina nanao fitafiana sivily ireto ity gadra nitsoaka ity. Tamin’izay indrindra no nidiran’ireo avy ao amin’ny Zandarmaria ka nisambotra tsy nisy avakavaka izay rehetra hitany teo na gadra io na tafika io.
Tao anatin’ny fotoana fohy dia niely eraka ny fonja rehetra manerana an’i Madagasikara ny zava-niseho. Nisy ny firaisankinan’ny mpandaraha ny fonja malagasy rehetra, araka ny nolazain’i Adj Chef Vonjy. Tapaka ny hevitra fa hanao fitakiana ny hamoahana tsy misy raorao ireo mpiampina ny fonja nogejain’ny zandary. Tapita omaly Alakamisy 01 Novambra teo io Ultimatum io. Tsy nivoaka annefa ireo mpiampina 12 lahy. Nisy ny fepetra fanampiny noraisina vokatr’izany dia nofoanana ny famangiana, tsy noraisina intsony ireo gadra nampidirin’ny fitsarana ny fonja. Mitohy ihany kosa anefa ny fampidirana ireo sakafo sy zavatra ilain’ny voafonja avy amin’ny fianakavian’izy ireo. Anio dia nanambara ity mpandraharaha ny fonja ity fa ho mafimafy kokoa ny fepetra horaisin’izy ireo vokatry ny zava-niseho teny Tsiadana iny. Tsy nilaza ny mety ho endrik’izany fitakiana izany anefa ny tenany fa hofantatra miandalana eo ihany.
Mitohy hatrany ny lonilony eo anivon’ny ministera Gvt Beriziky. Eo ambany fiahian’ny Minisitry ny Fitsarana ny Fonja. Ahiana araka izany ny hitaran’izao raharaha izao ka mety hisy fiantraikany na amin’ireo voafonja sy izay miambina azy na eo amin’ny Minisitry ny Fitsarana sy ny Komandin’ny Zadarmaria. Tsiahivina fa ity farany, Gal Ravalomanana Richard, dia torian’ny CST Ramaroson ho namono ny zanany izay Minisitry ny mponina teo aloha. Ho tonha hatraiza ny fahaizan’i Christine miaro ny olony amin’izao raharaha izao?
HIVOAKA NY KIANJA NY ZANAK’I DADA NY 01-11-2012
Posted on October 31, 2012 by Tiana Maharavo	Benja ANDRIAMIHANTA - CENIT MVC RAVALOMANANA
Efa tafapetraka avokoa ny olon’ny Ankolafy Ravalomanana manerana ny Kaominina rehetra eto Madagasikara hoy ny Mgt Benja Andriamihanta. Tokony hanantanteraka ny fanisam-bahoaka hahatafiditra azy ao amin’ny lisi-pifidianana ny malagasy rehetra ary miantso ny Anklolafy Ravalomanana ho ohatra ny tenany.
Hiaraka amin’ny hetsika ataon’ny HMF ny voalohan’ny volana Novambra izao ny Ankolafy Ravalomanana. Hivavaka sy hitalaho amin’ny Tompo be voninahitra mba hitsinjo ny vahoaka malagasy. Miantso araka izany ny sarambabem-bahoaka rehetra hifanotrona eny Atsahamanitra ny Kianjan’ny Finoana. Manomboka amin’ny 2 ora ny fotoana.
Mpianatra Leadership nozaraina mari-pahaizana
Miomana amin’ny fidiran’ny Filoha Marc RAVALOMANANA an-tanindrazana isika, hoy ireo izay nandray anjara fitenenana. Nisy ny vokatsoa noraisin’ny malagasy nandritraireo taona maro nitondrany an’i Madagasikara. Nilaza ny mpikambana iray ao amin’ny CT avy any Antsirabe fa nampianariny hahay hitantana toa azy ihany koa ireo mpiara-miasa aminy. Nisy ny fanofanana “leadership” nataony ho an’ireo Sefo Fokontanyrehetra nanerana ny Nosy. Nanao izany ihany koa ny Ankolafy izay tarihiny ankehitriny tamin’ny fanomezana mar-pahaizana ho an’ireo mpikambana nahavita io fiofanana io tany Bel Air ny maraina teo.
Tsy mahay mitantana ny FAT hatramin’ny nahazoany fotondrana. Nohazavain’ireo mpandahan-teny hafa fa na izy samy izy aza dia mifamely ankehitriny. “Mifanaikitra ny foza” ary hatrany anaty andrim-panjakana aza dia hahatsapana izany hoy ny CST Lova. Tsy handany ny teti-bolam-panjakana 2013 ny Ankolafy Ravalomanana fa satria hita toa tsy mitsinjo ny tombotsoam-bahoaka izy io. Naodikodina nyvolam-panjakana natokana hanaovana fifidianana matoatoa tamin’ity taona ity. Ripahana ny vahoaka malagasy any Atsimo ka i Lylison no asaina manantanteraka izany.
MAMPIKORONTANA NY MPOMBA AN’I RAJOELINA NY RAHARAHA ANY ATSIMO
Posted on October 30, 2012 by Tiana Maharavo	Hosted by Kiwi6 file hosting.
Nisy ny fivoroana azon’ny rehetra natrehena teo anivon’ny CST Anosy ny Talata tokalandro. Nanao tatitra ny san’ny Komisoionina fiarovana no fandaharam-potoana tamin’izany. Alain Ramaroson no Filohan’io Komisionina io. Ny Raharaha tany atsimo no anisan’ny nibahana tamin’ity fotoana ity. Tsy mety tratra i Remenabila hatramin’izao. Nisy tamin’ireo CST nilza fa efa nisy ny fotoana nahatratrarana azy fa nohon’ny baikon’ny avy any ambony dia tsy maintsy navotsora ity iraika lahy ity. Anisan’ny nitarika teny ny Birao maharitra izay nahitana ny Filoha Lefitra Rtoa Hanitra RAZAFIMANANTSOA.
Matahotra ny hirotahan’ny vahoaka i Alain Ramaroson. Hita toa natahotra ny hisitahan’ny namany ity Filoha ity ary niantso ny firaisan-kinan’ny CST. Tsy nitsitsy fitenenana ny Ankolafy Ravalomanana. Fahadisoana ny nandefasana ny kolonely Lylison nakany Atsimo. Fantantra ny zavatra ratsy vitany tany Ihosy hoy ny Sen Naika Eliane. Nalaza ho namono olona izy taamin’izany. Nilazaina ihany koa ny zavatra nataony tamin’ny 7 Febroary tamin’ny fitondrana olona hatao sorona eny Ambohitsirohitra. Tsy mahagaga hoy Rtoa Sen. raha misy faty olona mikararana any.
Ny CST Manandafy Rakotonirina kosa dia nilaza fa tsy mitovy tamin’ny 1971 izay nisian’ny ady hevitra politika teo amin’ny Monima sy ny Psd ny zava-misy tany Atsimo ankehitriny. Nitarika tamin’ny fandroahana ny tafika frantsay izany. Izy ireo hoy ny CST Manandafy no mamatsy basy sy bala ho an’ireo dahalo ireo. Amin’izao dia tsy nofantarina akory ny fahavalo sy ny tsy fahavalo. Raharaha omby no hamonoana olona any ankehitriny. Nakanikanian’ireo CST momba ny fitondrany nandritra ny fotoana fohy io fandraisam-pitenenana io.
Indro tanterina aminao ny santionany tamin’ny feo izay voaray
Me HANITRA: TSY FITADIAVAM-BOLA NO ANTONY NIDIRAKO TAMIN’NY TETEZAMITA IRAISANA.
Posted on October 29, 2012 by Tiana Maharavo	Tsy tontosa ny fikasana handrava ny birao maharitra teo anivon’ny Filan-kevitra ambonin’ny Tetezamita (CST). Latsa-baton’ireo 2/3-ny Mpanolo-tsaina Avon’ny Tetezamita amin’ny fahadisoana mihoam-pampana ataon’ny Birao maharitra no azo anatanterahana izany araka ny fitsipika anatiny mifehy ity andrim-panjakana ity. Nahenan’ny Governemanta nifandimby ny vola enti-miasa natokana ho an’ny Mpanolo-tsaina Avon’ny Tetezamita. Teti-bola aroson’ny Minisitry ny Vola holaniana eo anivon’ireo andrim-panjakana mpanao lalana anakiroa no mùamaritra izany. Ahiana ny tsy handanian’ny CST ny tetibolam-panjakana 2013.
Me RAKOTOMAVO Hanitriniaina Razafimanantsoa - Filoha Lefitry ao amin'ny CST
Tokony hisy ny fangaraharana raha ny amin’ny fampiasam-bolam-panjakana mandritra izao tetezamita izao. Ho an’ny Filoha Lefitra fahafito dia sambany tamin’izay fitondrana rehetra nifandimby teto no nisy mpanao politika nilazana ampahibemaso ny karama sy ny tombontsoa raisiny avy amin’ny Fanjakana. Mety ho kely sy bitika izany ho an’ny sasany mety ho tsy sahaza ho an’ny hafa, kanefa ny toerana nomena ny tsirairay eo anivon’ny andrim-panjakana toy itony hoy izy dia manokatra fahafahana hanavotra an’i Madagasikara taorian’ny fikorontanana politika nateraky ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. “Amiko dia fahafahana hitondra avo ny foto-kevitra ijoroan’ny Ankolafy Ravalomanana ny nanekeko hiditra eto anivon’ny CST. Izany koa dia fomba iray ahafahako manompo ny tanindrazako sy ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy fitadiavana tombontsoa manokana akory no nanosika ahy hanao izany. Raha natokako feno tamin’ny asan’ny mpisolo-vava ahy ireo fotoana laniko tamin’ny maha-Filoha Lefitra ny tenako dia betsaka kokoa ny vola azoko raha ampitahaina amin’izay raisiko ankehitriny.”
Mila mitsitsy ny mpitondra Fanjakana mandritra izao tetezamita izao. Tokony hanome ohatra amin’izany ny Filohan’ny FAT ka hilaza am-pahibemaso ihany koa ny fomba nndaniany ny volan’ny Prezidansa sy ny an’ny Governemanta. Maro ireo mpanao politika niaraka nihira tamin’i Andry Rajoelina no mihazakazaka mamorona trano, mividy fiara… Ny filohany mihintsy aza no mahavita mandany ny volam-panjakana mba hamatsiana ny hambom-po politikany amin’ny fananganana hopitaly manara-penitra sy kianja manara-penitra ary ny fitokanana ny zava-bitan’ilay Filoha izay naongany. Araka ny siosion-dresaka dia nanagana tranobe any Dubai ny Filohan’ny FAT. Ho an’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Tetezamita dia tsy ampy hamitana ny tetezamita ny teti-bola naroson’ny Governemanta.
Ar 13 900 000 000 no teti-bola natokan’ny Governemanta ho an’ny CST ho an’ny taona 2013. Ho an’ny Governemata dia nitombo Ar 200 000 000 izany teti-bola izany raha roa ka nihena Ar 19 100 000 000 izany raha noharina tamin’ny HAT (CST voalohany). Visty lavitra ny mpikambana teo anivon’io Andrim-panjakana mpananao lalana io raha noharina tamin’izao fotoana izao. Betsaka kokoa anefa ny karama sy ny tombontsoa azon’izy ireo izay lazaina manataka izao:
(amin’ny Ariary isam-bolana)
* Karama isam-bonana : 7 000 000
* Solika: 4 000 000
* Fahana teleonina : 3 400 000
* Fanatrehana fivoriana : 70 000 – 100 000 Ar isan’andro misy fivoriana
* Saran’ny fivezivezena (roplanina) : iantohana
* Hofan-trano : 1 000 000
* Mahazo fiara-kodia
Teti-bola : 33 000 000 000
Nihena kely fotsiny io tamin’ilay CST teo aloha.
isan’ny mpikambana: 90
* Karama isam-bonana : 5 000 000
* Fahana teleonina : 3 000 000
Amin’izao fotoana izao dia misy 165 ny mpikambana
* Karama isam-bonana : 1 200 000
* Solika: anelanelan’ny 1 000 000 – 1 400 000
* Fahana teleonina : anelanelan’ny 300 000 – 340 000
* Saran’ny fivezivezena (roplanina) : tsy iantohana
* Fanatrehana fivoriana : tsy misy
* Hofan-trano : 40 000
* Mahazo tsy mahazo
Teti-bola : 17 000 000 000
Samy manana ny tanjony sy ny tombontsoa katsahiny izay miditra anaty Fitondrana. Misy ny manararaotra izany mba hanarenana ny firenena. Ny hafa kosa mahita io fahafahana io hamenoana sy hangalana ny volan’ny Malagasy izay anaty fahantrana maha-kizo fara.
MIANTSO NY MIARAMILA HIARO NY SAFIDIM-BAHOAKA NY VP CST
Posted on October 20, 2012 by Tiana Maharavo	Hosted by Kiwi6 file hosting.
Vahoaka tsy tambo isaina no tonga teny amin’ny MAGRO namaly ny antso nataon’ny TIM Antananarivo Renivohitra tamin’izao faran’ny herinandro izao. Fampitam-baovao ny amin’ny fizotran’ny tolona no nibahana tamin’iny kabary nifandimbiasana teny. Tapitra tamin’ny 18 Oktobra ireo 60 andro hanaovana ny tombana mikasika ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana hametrahana fiarovana ny Filoha Ravalomanana sy ny Fianakaviany rehefa tafiditra soa aman-tsara eto an-tanindrazana izy ireo. Miroso amin’ny famaranana ny krizy politikan’i Madagasikara ny vondron’ireo firenena mikatsaka ny fampandrosoana aty amin’ny faritra Atsimon’ny Afrika (SADC).
Tsy nisy ny fihaonanan’ny Ankolafy RAVALOMANANA tamin’i Simao. Nisy kosa anefa ny tatitra nataon-dRtoa VI CST Me Hanitra RAZAFIMANANTSOA. Nihaona tamin’ny delegasionina miaramilan’ny SADC notarihan’i Gal Moyounga ny Ankolafy RAVALOMANANA. Niara-nijery ny Fomba hanantanterahana ny fodian’ny izy ireo. Nisongadina nandritra ny fihaonana fa tsy azo ianteherana amin’ny fiarovana ny Filoha sy ny fianakaviany ny Tafika Malagasy. Manaporofo izany hoy izy ny fivadibadihan-kevitra nataon’ny Gal Ranto. Tsy ny fanajana ny fitsipika miaramila ny fanaovana politika. Ireo miaramila mpikambana ao amin’ny Governemanta Beriziky dia tokony haka disponibilité. Tsy nanantanteraka an’izany anefa izy ireo mandrak’androany.
Nolazain’ny Ankolafy Ravalomanana ihany koa fa betsaka ny vahoaka mpomba ny Filoha vonona ny hiaro azy sy ny fianakaviany. Misy ihany koa ireo miaramila izay manaja ny fitsipika mifehy azy vonona hanantanteraka ny asany dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Nisy ny antso avo nataon’ny Filoha Lefitry ny CST mba hijoroan’ireo miaramila Malagasy hiaraka amin’ny vahoaka sy hiaro ny safidiny. Teknisianina fa tsy mpanao politika ny miaramila. Safilm-bahoaka no nahalany ho Filoham-pirenena ny Filoha Marc RAVALOMANANA ka tokony miaro izany safidim-bahoaka izany ny miaramila hoy ihany ny Filoha Lefitry ny CST. Nisy ny fihaonan’ireo miaramila ireo tamin’ny miaralilan’ny SADC. Jeneraly amperin’asa, manam-boninahitra lefitra ary vata-miaramila no nilaza tamin’ny miaramilan’ny SADC fa ny fiverenan’ny Filoha an-tanindrazana dia midika tombontsoa ambonin’ny firenena ka hitondra an’i Madagasikara ho amin’ny Filaminana.
Vonona hitrika ny fifidianana rehetra hiseho eto Madagasikara ny Ankolafy RAVALOMANANA. Nampirisika ny mpitolona rehetra manerana ny Nosy ny VP CST mba hisoratra anarana sy hanara-maso ny lisitry ny mpifidy. Raha tsy manao izany isika hoy izy dia manome vahana ny hala-bato. Tsy maintsy i Marc RAVALOMANANA no kandidà atolotsika hoy izy ary tsy maintsy 1e tour dia vita ny azy. Miandry ny valin’ny tatitra nataon’ny miaramilan’ny SADC amin’ny filoham-panjakana rehetra araka izany ny Ankolafy RAVALOMANANA. Tsy midika fanadinoana ny vahoaka malagasy ny tsy fiantsoan’ny an-telefonina mivantana eo amin’ny MAGRO. Misy hoy ny VP CST ny mampiasa ireny foen’ny Prezidà ireny ho amin’ny zavatra hafa. Rehefa hiantso antsika eto izy dia izay ilay sioka tokana hivoahantsika ny trano.
Posted on October 13, 2012 by Tiana Maharavo	Hosted by Kiwi6 file hosting.
TANORA TIM ANTSIRABE
Radio Fahazavana FM 88.6 Mhz	Proudly powered by WordPress.